RANARIVELO NARCISCE ETIENNE : “Mitaiza zafikely sisa no tokony hataon-dRavalomanana”
Manoloana ny fihetsika asehon’ny mpanohitra amin’izao fotoana izao, dia manana ny ambarany ny mpamakafaka politika sady sekretera jeneralin’ny fikambanana Soanierana-Ivongo Miray, Ranarivelo Narcisce Etienne. 18 février 2021
Ny talata 16 febroary lasa teo, nisy ny fanehoan-kevitra izay nentiny. Fotoana izay nilazany fa tsy mila an-dRavalomanana intsony ny vahoaka malagasy maro an’isa. Tsy hadinon’ny Malagasy maro ny ampihimamba sy vono olona izay nataon-dRavalomanana ny taona 2002 sy 2009 ireny, hoy hatrany ny fanazavany.
Nanambara Ranarivelo Narcisce fa anisan’ireo noenjehin’ity Filoha teo aloha ity ny tenany tamin’ireny krizin’ny taona 2002 ireny. Tsy manana herijika politika hoentina miverina mandrombaka fahefana intsony Ravalomanana, ka tokony hitaiza zafikely sisa no tokony hataony, hoy hatrany ingahy Narcisce Ranarivelo.
Minia mikimpy tsy mahita ireo asa fampandrosoana
Mahakasika ireo fanenjehana maro samihafa ataon’ny mpanohitra ny Filoha Rajoelina, dia nanan-kambara ihany koa ity mpamakafaka politika monina ao Soanierana-Ivongo ity. Nanitrikitrika ny tenany fa teo amin’ny tantaran’i Soanierana-Ivongo dia ity Fitondrana ity no tena nahavita fotodrafitrasa maro indrindra tao Soanierana-Ivongo.
Eo ny lalana, ny toho-drano, sekoly, hopitaly… Minia mikimpy ireo rehetra milaza fa tsy misy asa fampandrosoana entin’izao Fitondrana izao. Nankahery ny Filoham-pirenena Ranarivelo Narcisce ary nanamafy hatrany ny fanohanany tsy misy fepetra an’ny Filoha Andry Nirina Rajoelina. Miantso ny vahoaka malagasy indrindra ny vahoakan’i Soanierana-Ivongo ihany koa ny tenany mba tsy hanaiky ireo fandrebirebena ataon’ny mpanao politika.